Phefumlelwa kodwa ungalandeli iiFomula | Martech Zone
Phefumlelwa kodwa ungalandeli iiFomula
NgeCawa, ngo-Epreli 6, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kule veki ndifunda i-Starbucked, ngu-Taylor Clark, ukulungiselela i-Indianapolis Business Book Club. UTaylor Clark uvula incwadi ethetha nge-Starbucks kwiintsuku zokuqala nokuba yayinjani into yokuvula amehlo xa i-Starbucks ivula i-Starbucks entsha ngaphaya kwesitrato- kwaye zombini ezivenkile bezinevenkile ezivelisa kakhulu kwityathanga.
Indikhuthazile ukuba ndibhale le posi kuba ndicinga ukuba kukho 'ezona ndlela zilungileyo' kodwa akukho ndlela yakuthengisa ngempumelelo. Ndiza kubhala ngakumbi malunga noku Ubudala bencoko 2, kodwa ndiyaphazamiseka ngokwenene 'yindlela yokuphumelela' yokubhala oyifumana kuyo yonke iwebhu. Ndidla ngokuphepha ukuxhasa okanye ukubamba iibhlog kunye neeblogi ezizama ukubilisa yonke into ukuya kwifomula. Akukho fomula.
Yintoni ekhoyo kwiWebhu ininzi yokuphefumlelwa!
Mhlawumbi ifomula ekuphela kwayo ekuthengiseni kukuba umahluko kuyo yonke into oyenzayo… ngamanye amagama, thintela ifomula. Ndizakhele iinkqubo zeposi ezichanekileyo ezichanekileyo zabathengi ekufuneka benike ukonyuka kwamanani aphindwe kabini kumanqanaba okuphendula. Idatha yayisemthethweni, ulwahlulo olwalungenawo umda wempazamo, ikopi kunye nolwakhiwo zazingqinelana nazo zonke 'iifomula', kwaye saye sanosaziwayo abathi baphosa ifuthe labo kunye negama / ukubonwa kobuso kwindandatho- kodwa iphulo laqhushumba .
Ngokulandela ifomula, kwakungekho nto yokwahlula iphulo kumakhulu okanye kumawaka amanye amaphulo alandela imigaqo efanayo. Ke-eli phulo lagqitywa kunye namanye amaphulo e-formulaic, kanye kwindawo yenkunkuma.
Yenza Okungafanelekanga. Sukwenza okwenziwayo
Kutheni le nto kwihlabathi iibhlog ziya kuvelisa amandla anjalo kwiwebhu? Abanye abantu bacinga ukuba kungenxa yenxaxheba enkulu, ubuninzi bomxholo, kunye nobungcali obuziswa yiblogger kumxholo. Ndiqinisekile ukuba ezo zinefuthe… kodwa ayisiyiyo yonke loo nto.
Inxalenye yento eyenza ibhlog yakho ibe nomtsalane yindlela abangahambelani ngayo nemigangatho yesiqhelo yobuntatheli. Ezinye iibhlog zingena ikati ilwa nokhuphiswano. Ibhlog ebhalwe ukwenza iiblogi zemali malunga nokutya okuhle. Ngamanye amaxesha ndiyathanda ukuthetha ngezopolitiko kunye nokholo (kwaye phantse ndifumana iimpendulo ezinobungozi).
Iiblogi zibonelela zombini umxholo kunye nobuntu, into engadibaniyo rhoqo xa kufikwa kublogi yequmrhu.
Uyazikhumbula iintengiso ezaziwayo ezivela kwiminyaka edlulileyo? Ukusetyenziswa kuka-Wendy Kaufman, i-Snapple Lady, kwanyanzela ukuthengiswa kwe-Snapple ukusuka kwi-23 yezigidi zeedola ngonyaka ukuya kwi-750 yezigidi ngonyaka ngo-1995. U-Wendy wayephendula iileta zabalandeli ku-Snapple ngexesha lakhe, kwaye i-arhente yayicinga ukuba ingayinto entle indlela yokukhuthaza uphawu. Iintengiso ziye zaba yimpumelelo enkulu!
UQuaker uthathe indawo, uWendy wayeka, kwaye yonke into yaya ekaptut… kulandela ifomula! Ekugqibeleni uQuaker wancama vumela uSnapple ahambe. Ngoku uWendy uliqabane kwi UWendy Wear - kunye nobungakanani bemisebenzi yokunxiba kwabasetyhini, kukhuthazwa ngebhlog yenyani!
Buyela kwindawo yam-sebenzisa iwebhu ukuzikhuthaza kunye nokufumana izimvo ezintsha ngezinto ezenziwa ngabantu kwintengiso yeemveliso zabo. Sukulandela iifomula… ulingelo! Yenza eyakho ifomyula!
Ndiyi-Cisco I-Prize Finalist-Nceda uxhase umbono wethu
Epreli 9, 2008 ngo-12: 38 PM
Ndicinga ukuba isivakalisi sokugqibela- "Yenza eyakho ifomyula!" - yeyona ibalulekileyo. Kulwimi lweshishini, ibizwa ngokuba ziZenzo eziPhambili. Ngokusisiseko, fumana ukuba yintoni esebenzayo, uyiguqule, emva koko uyamkele njengenkqubo yokusebenza esemgangathweni. Yile nto yenziwe ngu Starbucks.
Bathathe isifundo sikaHenry Ford sokwenza imveliso ngobuninzi, bayisebenzisela iinjongo zabo ("Unokuba nawo nawuphi na umbala owufunayo, ukuba nje ziitoni zomhlaba"), ezibenze baphumelela ngengqiqo yokuba iindleko zehlile, bakwazi lawula amava abathengi, kwaye wenze kuphela ezo zinto zibenze baphumelela ngaphandle kokuqikelela nokuzama izinto ezinokuthi zisilele.